PaLifeBogger, tinoremekedza kodzero dzevanobata copyright uye tichashanda navo kuti tivone kuti vanoputsa zvinyorwa (s) zvinobviswa pabasa redu. LifeBogger ine Nhau dzeVechidiki Plus Untold Biography Chokwadi pamusoro peVafambi veMabhola. Kana iwe uchicherekedza chero, ndapota tumira email ine zvese yakakodzera ruzivo kune ye "Copyright Kukanganisa" kuburikidza lifebogger@gmail.com. Isu tichaitora nekukurumidza kugadzirisa.
Iyo Dhijitari yemireniyamu Copyright Act (DMCA) Cherechedzo inoda kuti chero kukanganisa kwezvibodzwa kuri kunyora uye kuti inosanganisira chikamu chinotevera cheruzivo:
Siginecha kana yemagetsi siginecha yemuridzi wemuridzi kana munhu akatenderwa kuzviita pachinzvimbo chake.
Tsananguro yakanaka yebasa rakabvumiranwa rakanzi rakatyorwa neLifeBogger.
Tsananguro yezvinhu zvinoputsa uye ruzivo. Izvi zvinofanirwa kuve zvine chikonzero chakaringana kubvumira LifeBogger kuti iwane zvinyorwa.
Ruzivo rwako rwekutaurirana kuitira kuti LifeBogger igone kukubata iwe.
Chirevo newe kuti iwe une kutenda kwakanaka kwekutenda kuti kushandiswa kwezvinhu hakubvumidzwe nemuridzi we copyright
Chirevo chekuti ruzivo iripo mune chiziviso chakarurama. Zvikawanda zvakadaro, pasi pechirango chekutuka, kuti ruzivo rwamuri kutipa rwakarurama uye kuti ndimi muridzi we copyright kana mvumo yekuita pachinzvimbo chemuridzi we copyright.
LifeBogger ichaita zvakanaka mukupindura "zvese zvinotora-pasi zvikumbiro”Iyo inoenderana nezvinodiwa neDhijitari Yemari Yemireniyamu Copyright (DMCA), uye mimwe mitemo inoshanda yepfungwa.
Graham Potter Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi